Idatha enomtsalane ngezi zicelo ziyi-5 online ukwenza iigrafu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenza idatha yakho ibe nomtsalane ngezi zicelo zi-5 zikwi-intanethi ukwenza iigrafu
Imizobo yenye yeefayile ze- ezinye iindlela ezisebenzayo nezisebenzayo Xa kuziwa ekubonakaliseni isimilo samanani kwaye kungoku, kunokwenzeka ukubonisa indlela athe amanani aziphatha ngayo ngexesha lovavanyo oluthile, ukuququzelela umsebenzi wabo bobabini. umbonisi-umphandi noluntu, ekufuneka baluqonde olu hlobo lolwazi ngokufutshane nje.
1 Sebenzisa usetyenziso lwe-Intanethi ukwenza iigrafu
2 Uluhlu lwezona zicelo zibalaseleyo kwi-Intanethi zokwenza iigrafu
2.1 Ispredishithi zikaGoogle
Sebenzisa usetyenziso lwe-Intanethi ukwenza iigrafu
Zikhona namhlanje Iinkqubo ezininzi ezilawula ukuvelisa iigrafu ngokusekwe kumanani ethu, esivumela ukuba sisebenzise ezi ntlobo zezixhobo ngokulula kangangoko.
Ezi nkqubo zihlala zihamba nezixhobo ezikhoyo kwiikhompyuter zethu. Nangona kunjalo, kukho nezixhobo ezikwi-intanethi yenzelwe ukuba ikwazi ukuvelisa iigrafu ngaphandle kwesidingo sokubhenela kolu hlobo lwenkqubo. Ngale ndlela, sinikezela uluhlu lwezona zicelo zibalaseleyo kwi-Intanethi ukuvelisa imizobo.
Uluhlu lwezona zicelo zibalaseleyo kwi-Intanethi zokwenza iigrafu
Ngaphandle kokuba ayenzelwanga ngokuchanekileyo ukuba ivelise iigrafu, kunokwenzeka ukuba ufumane ngaphakathi kwemisebenzi yayo kule klasi yezinto.
Isebenza ukwenza yethu amanani edatha kulula ukuba acoleke kwizinto ezibonakalayo, kwaye ngale ndlela, ukuququzelela ukuqonda kwayo. Kwanele ukukhetha idatha esifuna ukuyiguqula ibe ligrafu, emva koko uye kwi Imenyu-Faka-Igrafu.
Kwiwindow entsha eza kuvela, siya kukhetha uhlobo lwegrafu esifuna ukuyisebenzisa kwidatha yethu. Nje ukuba ukhethe, singayenza ibe ngokwezifiso kwezinye iinkcukacha. Nje ukuba sikhethe zonke iikhrayitheriya, inkqubo iya kuthi isinike umbono womsebenzi wethu ngaphambi kokuya kuyilo lokugqibela.
Isivumela ukuba senze imisebenzi eya ngaphaya kokwenza iigrafu zedatha kwaye ikwasivumela ukuba senze idayagramu, iimephu ezisebenzisanayo, iziketshi, iskimu kunye nolunye udidi lokumelwa kwedatha, esivumela ukuba sibe nereferensi ebanzi ngokokumelwa kwedatha.
Esi sixhobo sinomhleli osebenzayo kwi-intanethi, a ezahlukeneyo zokhetho lokumisela uyilo lwethu, kunye nenani elingenasiphelo leetemplate ezilungiselelwe kwangaphambili ukukhetha phakathi kokukhethwa ngumsebenzisi. Ngaphandle koku, isicelo esinje sinokuba nzima, yiyo loo nto kuya kufuneka ukuba neqela elinamandla, okanye, ngokuchaseneyo, nomonde othile.
Iyakwazi ukuhamba kancinci ngaphaya kokuyilwa kwemizobo kwaye inefayile ye- Ukucaciswa kwe-infographics, iintetho ezikumgangatho ophezulu, kunye neengxelo ezinokuthi zenziwe ngokombala okhethwe ngumsebenzisi.
Esi sicelo siyilelwe ukwenzela ukuba yonke imisebenzi yomsebenzisi ibe nayo ukubonakala kobungcali ngokokusemandleni akhoKuba ukwenziwa kweetemplate kwesi sicelo kuyakuvumela ukuba uzigcine ngeendlela ezahlukeneyo: iPNG, PDF kunye neJPG.
Iqondwa njenge "ilahle ikhonkco phakathi kweespredishithi kunye nemizobo yevector".
Ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu, ke ngoko, nabani na angasebenzisa le sicelo, enye yeempawu zayo eziphambili kukuphuhliswa kweetemplate zentsusa, yiyo loo nto esi sixhobo sinika abasebenzisi bayo iprojekthi yoyilo kunye neyantlandlolo. Kule app singafaka idatha yethu ngesandla okanye ukope kwaye uncamathisele kwiifayile ezifumaneka ngaphakathi kwesicelo.
Inokuba malunga I-16 yoyilo lweetshathi ezahlukeneyo, Esiza kuvunyelwa ukuba senze ngokwezifiso nganye yezi zinto sikhethe.
Uyilo lwayo lubonakala lubalasele ngakumbi kwaye lubukeka. Okwangoku, ibonisa ezinye iinketho zokungenisa idatha, kunye neenketho zokwenza ngokwezifiso.
Ungangenisa idatha kwindawo yogcino lwedatha ye-SQL, esi sisicelo esiluncedo kakhulu enkosi kwindlela ekulula ngayo ukuyisebenzisa, ivumela abasebenzisi ukuba baqwalasele ukhetho lokujonga kuqala. Esi sicelo ivumela ukuba sinxibelelane nabanye abasebenzisi ukuze baguqule ifayile ngokweemfuno zabo kunye nemisebenzi.
Sebenzisa esi sicelo kufuneka wenze iakhawunti yomsebenzisi ngaphakathi kweqonga layo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yenza idatha yakho ibe nomtsalane ngezi zicelo zi-5 zikwi-intanethi ukwenza iigrafu
Ukusebenza ngamaxesha obunzima
Indlela yokukhanyisa amazinyo efoto nge-Photoshop